Afar qarax oo lagu weeraray labo saldhig oo ku yaalla Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Afar qarax oo lagu weeraray labo saldhig oo ku yaalla Muqdisho.
Warar naga soo gaaray Magaalada Muqdisho ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan Mujaahidiinta Xarakada Alshabaab ay qaraxyo loo adeegsaday Bambooyinka gacanta ku weerareen labo saldhig oo Maleeshiyaadka dowladdu ku leeyihiin gudaha magaalada Muqdisho.
Labada weerar mid ka mid ah waxa lagu qaaday fariisin Warshadda Caanaha ay ku leeyihiin ciidamada Imaaraadku soo dhaqan xumeeyay, waxana lagu dhuftay labo Bam gacmeed, halka weerarka labaadna lagu qaaday fariisin Police-ka ridadu uu ku leeyahay halka loo yaqaano Suuqa cowska, lamana soo sheegin khasaaraha ka dhashay labadaasi weerar.
Weeraradan ka dhacaya gudaha magaalada Muqdisho ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii u dambeeyay madaxda ridadu si wayn isugu dhex yaacday kadib weeraro saf ballaaran ah oo lagu qaaday dhowr saldhig oo ay ku jirto Madaxtooyadu.